सभ्य ब्याट्री जीवन
काला र डेकर एकदम उपयोगी उत्पादन हो यो सबै ट्रिम र चोकमा घाँस वर्तमान आकार सुविधाहरू छ रूपमा. ब्याट्री संचालित एकाइ धेरै हल्ला साथै बनाउन हुनेछ. रूपमा एकाइ सञ्चालन गर्न सजिलो छ, यो कामदार माथि प्रशिक्षण गर्न सजिलो छ. यो Trimmer कटौती र जटिल भागहरु आकार धेरै सुविधाजनक छ. तपाईं पक्कै पनि लगानीको देखि सबै भन्दा गर्नेछ. तपाईंले उपलब्ध सुविधाहरू आधारमा सही छनौट गर्नेछौं भनेर नै श्रेणी मा अन्य उत्पादनहरु मार्फत जानु पर्छ.
यो धेरै नियमित आधार मा बगैचा कायम गर्न आवश्यक छ. यस प्रक्रियामा उपकरण र उपकरण को विभिन्न प्रकार प्रयोग गरिन्छ. यस्तो पर्खाल र रूपमा जटिल स्थानहरुमा घाँस काट्न गर्न फव्वारे, को साधन गरेको डिजाइन तिमी यथासक्य लचकता दिनुपर्छ. तपाईं विभिन्न गति मा उपकरण प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ. तपाईं अधिकतम लचकता हुनेछ जब, यो तपाईं सुंदर सौन्दर्य पाउनेछन् भनेर यस्तो तरिकाले बगैचा को आकृति गर्न सम्भव छ. सही हाइट्स मा सकल सबै सामा हटाउने र आकार दिन द्वारा, तपाईं बाहिरी स्पेस सबैभन्दा गर्नेछ. काला & तल्ले LST 136 यो trimming को सही प्रकारको छ रूपमा यो कुरा तपाईंलाई मदत गर्न सक्छन्, edging र ह्यान्डलिङ मापदण्डहरु.
काला डेकर LST 136 सीधा सापट छ. यो स्वचालित सन्तुलनमा र उत्तरदायित्व धेरै उच्च छ. तपाईं पनि यस्तो पर्खाल रूपमा साँघुरो स्थानमा एकदम सजिलै घाँस ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ, फव्वारे र रूखहरू. तपाईं ठूलो गति मा काम कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ र यो ठाडो लाइन मा ट्रिम गर्न सम्भव छ. यो 36 एक सीधा सापट संग मूल्याङ्कन Trimmers वोल्ट आउँछ. उत्पादन को वजन छ7पाउण्ड. यो 0,065 "काटन लाइन छ.
यो Trimmer नियमित उद्देश्य लागि एकदम निर्धक्क प्रयोग गर्न सकिन्छ. यो नियमित mowing गतिविधिहरु पछि घाँस ट्रिम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ. तपाईं फूल बेड कायम गर्न सक्षम हुनेछ, एकाइ मा विभिन्न नियन्त्रण प्रयोग गरेर सडक छेउ र सीमाना एकदम सजिलै.
यो साधन ह्यान्डल गर्न सजिलो छ. तपाईं एकदम आराम नयाँ लाइन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. यो नियन्त्रण सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ. यो मिसिन ह्यान्डल गर्न सजिलो छ. रेखा प्रगति स्वतः हुनेछ. एकाइ थप काटन शक्ति उद्धार तपाईं एक कुशल तरिका मा काम छुटकारा गर्न सक्षम हुनेछ भनेर. तपाईं प्रति आवश्यकताहरु आफ्नो रूपमा शक्ति वा रनटाइम अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ प्रयोगकर्ता देखि मिश्रित प्रतिक्रिया हो. यो ब्याट्री शक्ति प्रयोगकर्ता लामो घन्टा को लागि Trimmer सञ्चालन गर्न सक्षम हुनेछ भनेर उन्नत हुनुपर्छ. यो ग्यास कटर संग धेरै उच्च हुनेछ मर्मतसम्भार रूपमा ग्याँस कटर भन्दा टाढा राम्रो छ.
यो सञ्चालन गर्न सजिलो छ
इन्जिन सुरु गर्न सजिलो
यो सभ्य ब्याट्री जीवन दिन्छ
वजन मा प्रकाश
यो साधन मध्यम जब गर्न प्रकाश गर्न पर्याप्त शक्ति छ
कुनै दोहरी लाइन
केवल एक ब्याट्री आउँछ
लाइन जब स्ट्रिङ अग्रिम स्न्याप सक्छ
काला चेकआउट यहाँ क्लिक & तल्ले LST136
ब्याट्री (बिजुली), काला डेकर, तल्ले, घाँस, निकल-मध्यम ब्याट्री, स्ट्रिङ Trimmer, उपकरण
← सुगा ग्रहिका स्मार्ट समीक्षा: तपाईंको कारको ड्यास एन्ड्रोइड? साठी मृत या क्यानाडा रेल प्रकोप हराइरहेको. →